Igwe kpakpando Ursa isi: Kedu ihe ọ bụ, mgbe na ebe anyị ga-ahụ ya? Network Meteorology
Mgbe a na-ekwu maka kpakpando ndị dị na mbara igwe, a na-akpọ ya aha ya Nnukwu anụ ọhịa bea. Ọ bụ kpakpando kachasị mkpa dị na mbara igwe dị n'ebe ugwu na nke atọ buru ibu. Mpaghara Arctic nwere kpakpando a ka o buru akara ya, ebe o no n’elu ya. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị na Nnukwu nri dị n'akụkụ ya Aurora borealis. Ha meputara otu n'ime ihe ngosi kacha mma na mbara igwe.
N'isiokwu a anyị ga-akpọ aha njirimara niile nke kpakpando a ma nye ozi dị mkpa gbasara ya. Want chọrọ ịmatakwu banyere kpakpando a dị mkpa? Nọgidenụ na-agụ na ị ga-amụta 🙂
1 Akụkọ banyere nnukwu nri
2 Mgbe na-ekiri
3 Igwe na-enwu gbaa na kpakpando
4 Echiche aboutgha banyere kpakpando Ursa Major
Akụkọ banyere nnukwu nri
Ọ bụ otu ìgwè kpakpando nke bụ otu n’ime ìgwè kpakpando iri anọ na asatọ ndị Ptolemy na-enyocha mbara igwe chọpụtara. Anyị na-aga narị afọ nke abụọ AD ebe onye nyocha a kpọrọ ya Arktos Megale. Na Latin okwu "ursus" putara bear mgbe n'asusu Greek o bu "arktos". N'ihi ya aha Arctic.
Site na Nnukwu Dipper, a kọwara mpaghara ugwu nke ụwa ebe Arctic dị. Ndị niile na-ezukọ na latitude nke + 90 Celsius na -30 Celsius ị nwere ike ịlele ya. Ursa Major bu kpakpando nke anyi huru na kpakpando pola dika ihe ngbanwe nke uwa n’abali n’enweghi uzo. Ya mere, a maara ya dị ka circumpolar. N'ihi nke a, enwere ike ịhụ ya n'ime afọ niile na mgbago ugwu.
Ọ bụghị kpakpando niile nwere oge kachasị mma iji hụ ha. N'okwu a, oge kachasị mma bụ oge opupu ihe ubi. Kpakpando nke mejupụtara kpakpando a bu n’agbata afọ 60 na 110 nde ọkụ. Kpakpando anọ ndị mejupụtara ya bụ Merak, Dubhe, Fekda na Megrez.
A na-ejikọ kpakpando atọ nke kpakpando atọ site na Alioth ruo Alcor na Mizar. Abụọ gara aga nwere peculiarity na ha abụghị okpukpu abụọ. Onye ọ bụla n’ime ha bụ afọ atọ dịpụrụ adịpụ n’ebe ibe ya nọ. Onye ikpeazu mere n’ahịrị a maara dịka Alcaid.
Igwe na-enwu gbaa na kpakpando
Igwe kpakpando Ursa Major nwere otutu kpakpando kacha egbuke egbuke, ya mere ha kacha puta. N'ime ha anyị nwere:
Alioth. Ihe ejiri mara ya bu odo odo na acha odo odo. Ọ dị ihe dịka afọ-81 dịpụrụ adịpụ site na ịdị ukwuu dị n’etiti 1,75 na ugboro 4 karịa Sun. Ọ dịkwa okpukpu 127. Naanị, ịnọ n'ọtụtụ dị anya karị anyị ga-ahụ ya dị obere.
Phecda ọ bụ nke abụọ dị ọcha nke dị afọ iri asatọ na anọ dị anya. Ọ na-enwu site na ịdị elu nke 84 ma jiri okpukpu asaa karịa Sun.
Megrez bụ kpakpando na-acha anụnụ anụnụ ma na-acha ọcha n'ihe dị ka afọ 58,4 dị anya ma dị 63% karịa oke karịa Sun na 14 ugboro karịa.
Alkaid A na-amata ya site na kpakpando ndị ọzọ site n'ịbụ isi usoro nke ọcha na acha anụnụ anụnụ. Ọ dị afọ 100 site na mbara igwe anyị nke nwere okpukpu isii nke Sun na 700 ugboro karịa.
Mizar na Alcor nwere ike ịmata dị ka kpakpando abụọ. Ha so na ndị kacha ahụ anya n’abalị. A maara ha dịka thenyịnya na Onye na-agba ịnyịnya ma nwee agba ọcha. Ha dị na anya nke afọ 80 ma nwee Mizar na-enwu ịdị elu nke 2,23 na Alcor nwere 4,01.
Dubhe ọ bụ nnukwu kpakpando nke dị ihe dị ka afọ 120 dị anya. Agbanyeghị, ọ bụ kpakpando nke okpukpu 400 karịa Sun. Ọ bụ usoro ọnụọgụ abụọ nke kpakpando ndị na-agbagharị ibe ha otu ugboro kwa afọ iri anọ.
Na-eche Achọpụtara ya dị ka kpakpando na-acha ọcha na ọ dị afọ 79 dị anya. O nwere okirikiri ugboro 3 nke Sun na otutu ya. Emere ya site na idi uzo 70.
Echiche aboutgha banyere kpakpando Ursa Major
Igwe kpakpando a agabigala n'akụkọ ihe mere eme site na ọtụtụ aha na ọnụ ọgụgụ dabere na ebe a hụrụ ya na nkwenkwe nke mba ọ bụla. Ọmụmaatụ, ndị Rom chịrị ọchị ịhụ ka ọ na-achị ehi. Ndị Arab hụrụ ụgbọ ịnyịnya n’elu mmiri. Obodo ndị ọzọ nwere ike ịhụ kpakpando atọ na-arụ ọrụ dị ka ọdụ na ikekwe ndị a bụ ụmụ nkịta na-eso nne ha. Ha nwekwara ike ịbụ dinta na-achụ anụ ọhịa bea ahụ.
Ndị Iroquois India nke Canada na Micmacs nke Nova Scotia kọwara ntụgharị anụ ọhịa ahụ ka ndị dike asaa na-achụ ya. Dabere na nkwenkwe, mkpagbu a na-amalite kwa afọ na mmiri. Ọ na - amalite mgbe anụ ọhịa bea ahụ hapụrụ ebe obibi ahụ na Corona Borealis. Mgbe mgbụsị akwụkwọ rutere, ndị dinta jidere bea ahụ wee si na nke a nwụọ. Ọkpụkpụ ya na-anọgide na mbara igwe ruo mgbe anụ ọhịa ọhụrụ ahụ si na ọgba ya pụta n'oge opupu ihe ubi.
N'aka nke ọzọ, ndị China jiri kpakpando nke Big Dipper dị ka ụzọ isi mara mgbe ha ga-enye ndị ha nri. O gosiri ha oge nri kọrọ. Akụkọ a nke kpakpando na-akọ na Callisto, bụ onye nymph nke raara onwe ya nye ahụ na mkpụrụ obi nye chi nwanyị Atemis, dọtara uche Zeus. Ka oge na-aga, ọ ghọgburu ya, mgbe ọ mụsịrị nwa ya nwoke aha ya bụ Arcas, eze nwanyị nke chi, Hera were iwe wee gbanwee Callisto ka ọ bụrụ anụ ọhịa bea.
Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, mgbe Arcas gara ịchụ nta, ọ na-aga igbu anụ ọhịa bea ahụ n'amaghị ama mgbe Zeus batara ma tinye Callisto na Arcas ka ọ bụrụ anụ ọhịa bea. na mbara igwe dika Ursa Major na Ursa Minor, karị. Ọ bụ n'ihi nke a ka ụyọkọ kpakpando ndị a dị okirikiri, ọ dịghịkwa mgbe ha mikpuuru onwe ha n'okpuru mbara ala ma e lee ha anya site n'ebe ugwu latitude.
Site na ihe omuma ohuru a ị nwere ike ịmụtakwu banyere kpakpando Ursa Major mgbe ị hụrụ ya na mbara igwe. Ọ dị mkpa ịmata ihe dị na mbara igwe anyị ịmatakwu gbasara eluigwe na ụwa anyị bi n'ime ya. Ihe dị ka ụyọkọ kpakpando a enweghị ike ịga not
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Akwa agba